Amangqina kaYehova ayakumema: Indibano ithi, “Yiba NjengoYesu” | News24
Amangqina kaYehova ayakumema: Indibano ithi, “Yiba NjengoYesu”
Kulempelaveki AmaNgqina KaYehova azakuba nendibano yonyaka yeelwimi ezi sibhozo apha e Cape Town Stadium.
AmaNgqina adlulisela isimemo kuni nonke ukuba nibekho. Umxholo wendibano walo nyaka uthi “ Yiba NjengoYesu!”.
UMtutuzeli Sitinga, osisithethi sendibano yaseKapa unika lengxelo.
“UYesu, umseki wobuKristu, waziwa ngokubanzi njengoyena onempembelelo enkulu kunamadoda abalaseleyo akha aphila.
NjengamaKristu,undoqo wokholo lwamaNgqina KaYehova lukukuthi uYesu wabuphila ubomi bakhe njengomzekelo wokuba siwulandele.
“Lendibano ethi “Yiba NjengoYesu” iza kuhlolisisa ubomi bakaYesu njengoko buboniswe eBhayibhileni, ize igxininise indlela abanokuthi bonke – kungakhathaliseki imvelaphi yabo, ubomi ababuphilayo okanye unqulo – banokungenelwa kumzekelo neemfundiso zakhe. Imbalasane yocwangciso yintetho engumxholo wendibano ezakuba kusasa ngolweSihlanu ngo 11:25 enomxholo othi “Nguye Uvimba Wabo Bonke Ubuncwane Bobulumko”.
Ukususela kule mpelaveki ukuya kwiveki ezintathu ezilandelayo, amaNgqina kaYehova aseNtshona Koloni azakuhambisa izimemo kuni nonke kwikapa liphela nakwindawo ezisingqongileyo ukuba nize kule ndibano.
Apha ekuhlaleni , ngaphezu kwamaBandla ayi 160 AmaNqina kaYehova aza kuncedisa ukuhambisa ezi zimemo zendibano. Akungenwa ngamali. Iindibano zamaNgqina kaYehova zixhaswa yiminikelo yokuzithandela.
Le ndibano intsuku- ntathu iqalisa ngolwesihlanu umhla wama 23 October, 2015, ngentsimbi ye 9:00 kusasa. Kulindeleke abantu abangama 20,000 abezayo eCape Town Stadium eGreen Point kucwangciso olusekelwe ebhayibhileni, luqhutywa ngaxeshanye nge: IsiNgesi, IsiBhulu, IsiXhosa, IsiFrentshi, IsiPhuthukezi Nentetho Yezandla yase Mzantsi Afrika.
Amangqina kaYehova eMzantsi Afrika alungiselela iindibano eziyi 61- ngeelwini ezi yi 23- kwindawo eziyi 26 nakwizixeko ezinkhulu kulindeleke abantu abangaphezu kwama 214,000. Zwenibanzi angaphezu Kwezi 8,000,000 amaNgqina KaYehova kumabandla ali 115,000